कहिले आउँछ सरकारले घोषणा गरेको एक करोड डोज खोप ? - Chandragiri News
Home समाज कहिले आउँछ सरकारले घोषणा गरेको एक करोड डोज खोप ?
२०७८, ४ असार शुक्रबार ०९:३६
सरकारले एक दुई महिनाको अवधिमा एक करोडभन्दा बढी डोज खोप लिने घोषणा गरे पनि न कुनै देशबाट खोप आउन सकेको छ न त सम्बन्धित देशले खोप दिने समय तोकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने बुधबार कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकमा थप ४० लाख खोप ल्याउने एक साताभित्र तयारी भइरहेको बताए।
Previous articleकिपुल्चा (किसिपिडी)बाट बलम्बुमा ‘ग्व:जा छाय्गु’ पुजा पर्व सम्पन्न